Ahoana no hampitomboan'ny Netflix ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny fampiasana angona lehibe | Martech Zone
Ahoana no hampitomboan'ny Netflix ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny fampiasana angona lehibe
Alarobia, Febroary 28, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ny traikefan'ny mpanjifan'ny mpanjifa dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fitazonana azy ireo amin'ny maha-mpanjifa azy na tsia ary raha toa ka azo hatsaraina izy ireo. Ny fisamborana ny fampiasana rindranasa dia fitaovana iray ilaina amin'ny fanaovana izany. Raha fivarotana antsinjarany ianao, orinasa, na serivisy - ny famerenana, ny fiverenana, ny referral, ny antso ary ny fandaniam-potoana dia mety hanome tahiry mahavariana izay afaka maminavina ny fomba fividianana.
Tena ilaina amin'ny orinasa izany. Na dia mety tsy tafiditra ao anatin'ny andraikitry ny ekipa mpivarotra anao aza ny fihetsiky ny mpanjifanao dia mety handiso azy tanteraka izany. Na dia mety tsy afaka manova ny traikefan'ny mpanjifa aza ireo mpivarotra dia tokony hanara-maso azy tanteraka izy ireo ary hamakafaka ny fiatraikany amin'ny fiovam-po, ny lanjan'isa, ny fitazonana ary ny referraly.
Netflix sy Big Data
Ny angon-drakitra lehibe dia manampy an'i Netflix hanapa-kevitra hoe iza amin'ireo programa no hahaliana anao ary ny rafi-pitondran-kevitry ny Netflix dia misy fiantraikany amin'ny 80% ny atiny nojerena tamin'ny lampihazo. ny algorithm tsara indrindra amin'ny faminavinana ny tian'ny mpanjifa sarimihetsika miorina amin'ny naoty teo aloha.
Ny algorithm dia manampy an'i Netflix hitahiry $ 1 miliara isan-taona sanda amin'ny fitazonana ny mpanjifa. Ity infographic avy amin'ny FrameYourTV antsipiriany ny fomba. FrameYourTV dia manana loharanom-pahalalana ho an'ny fahitalavitra mahazatra sy vita tanana ary fahitalavitra fitaratra.
Tags: lehibesary manokana an'ny hdtvframeyourtvfitaratra fahitalavitrafahitalavitra fitaratraNetflixnetflix algorithmfaminaniana netflixfandaharana amin'ny fahitalavitra
Ireo mpifaninana aminao dia miasa amin'ny paikady IoT handevina anao
Ahoana ny fomba hampihenana sy hamerenana ireo karatra fiantsenana nilaozana